Commun.it: Mfe Njikwa Obodo Obodo Twitter | Martech Zone
N’izu a, a kpọrọ m ka m kwuo okwu na Smartups (Smarter Marketing + Startups) site n'aka onye guzobere ya, Tim Flint. Tim bụ onye obodo nchịkọta guru. Mkparịta ụka m bụ na njikarịcha na m kwuru banyere ya kpọmkwem na nchịkọta… kamakwa otu njikarịcha ka emetụta azụmahịa m.
Otu ebe m metụrụ aka bụ na eserese nke ịchọrọ nọmba iji dọta, mana leghaara ịchụ nọmba ahụ anya ma bulie ihe ndị ịchọrọ. Kpọmkwem na Martech Zone, uto anyị gbawara mgbe anyị kwụsịrị ịchụ SEO tweaks na usoro njikọ njikọta kachasị ọhụrụ na - kama - lekwasịrị anya n'inye ndị ahịa uru. Uru ahụ bụ ide ihe karịa na inye ọdịnaya bara ọgaranya.
Ijikwa obodo Twitter gị chọrọ akụrụngwa na mkpesa iji mata ndị ọrụ ịchọrọ ijikọ, gee ndị ọrụ na-achọ ngwaahịa na ọrụ ị na-enye, leghaara ma ọ bụ mepee ndị spamm na akaụntụ ndị na-adịghị arụ ọrụ, ma bipụta ya kasị mma ọdịnaya enwere ike ịdọrọ, jigide ma tọghata ndị na-eso ụzọ kasịnụ Nke a bụ ihe Commun.it na-atụ anya ịnye ndị ọrụ ya site na ikpo okwu ya.
Commun.it Na-enye atụmatụ ndị a
Ọtụtụ Profaịlụ Twitter - Jikwaa ọtụtụ profaịlụ Twitter dị mfe site na otu dashboard.
Ndị òtù - Kpọọ ndị otu gị ka ha jikwaa obodo gị.
Nghọta - Chọpụta onye ị ga - eso, kelee ma zaghachi.
Monitoring - Tụọ mbọ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, mara ihe na-arụ ọrụ. Echefula ihe dị mkpa ekwuru.
Ahịa Ahịa - Gbado anya na ndị isi na ndị na - akwado gị, echefula nkwa ha, soro ha.
Jikwaa ndepụta Twitter - wulite ndi ozo jiri aka na Twitter. Kewaa ndepụta n'ime edemede ọdịnala.
Iji ngwa ọrụ dị ka Commun.it, ị nwere ike ijikwa ihe ịtụnanya na-esote gị karịa ịchụso ihe. Nsogbu a na echiche nke foneelu bu na ndi mmadu kwenyere na ala nke onu ahu adighi adi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnweta ọnụọgụ ntụgharị 2%, naanị ị ga-achọ ị nweta ndị ọbịa ka ịbawanye ahịa gị. Anyị achọpụtala na nke a abụghị ikpe ọ bụla… ị kwesịrị ị na-arụ ọrụ na ịtụgharị ndị na-eso ụzọ ị nwere.
Tags: ọhanezeobodoNjikwa ObodoTwitter